Sọftụwia dịka Ngwa Ngwa Ọrụ
Nke a na-atọ ọchị n'ihi na amaara m ụlọ ọrụ abụọ mepụtara ihe ndị a usoro nkwanyeHa na ebe a na Indiana! Ikekwe ọ bụ ihe Purdue na Anderson University University! Ogwe mepere Enwere ike na Sayensị Studio emeela ka a tọhapụrụ ya Ọkt (na mbụ TinderBox), ma ngwanrọ dị ka azịza ọrụ maka web.
Enwere ike ịchọta ihe ngwọta dị ala, na-amalite na $ 19 maka isi, $ 29 maka pro na $ 79 kwa ọnwa maka otu. Yana Isi mmalite mwekota, o yiri ka ọ bụ usoro dị ike maka ịmepụta na izipu atụmatụ ọdịnaya bara ụba - yana nyochaa ọrụ nke atụmanya onye na-enweta atụmatụ ahụ.
Nke a bụ vidiyo metụtara maka ngwaahịa ha:
Dị ka ihe ọ bụla otu Kristian na-emetụ, Ọkt na-egbu maramara nke ọma ma bulie ebe Proposable na-apụ. Ngwunye ngwugwu ntinye bụ maka ndị ahịa na $ 79 kwa ọnwa na nchịkọta na-eto na $ 999 kwa ọnwa yana maka ndị ahịa Enterprise. Octiv nwekwara usoro ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ na atụmatụ ndị ọzọ pụrụ iche.
Na Octiv vidiyo:
Ngwa abụọ a na-enye sistemụ nkwukọrịta maka nzaghachi na nyochaa ọganihu nke nkwupụta ahụ. Obi dị m ụtọ banyere ohere maka usoro abụọ a. Dị ka onye ji mmụọ kpọrọ ihe nke Akwụkwọ ọnụahịa ọhụrụ, Ọ ga-amasị m ịhụ njikọ nke sistemu ndị a na Freshbooks! Akwụkwọ ọhụrụ nwere usoro atụmatụ siri ike (ụdị akwụkwọ ọnụahịa) nke enwere ike zigara onye ahịa ma nyochaa, mana ha enweghị atụmatụ niile nke Proposable ma ọ bụ Octiv.
Ekelere Kristian na ịpịpụta ngwaahịa a. O doro anya na ya na ndị otu ya ga-aga nke ọma na ya! Kristian si branding ike bụ otu nke kasị mma n'ụwa. Ọ bụrụ na m nwere ngwanrọ dị ka ngwaahịa ọrụ ma chọọ ya akara nke ọma maka uto nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ya ga-abụkarị nhọrọ m.
Tags: ntughari ntugharifoneelu na-akọoctivọkọnọnjide njideAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Jul 8, 2010 na 9: 22 AM
Daalụ maka TinderBox kpọtụrụ Doug. Anyị malitere na beta azụ na Jenụwarị ma nweta nzaghachi ndị ahịa magburu onwe ya dịka ngwaahịa ahụ nwere ọganihu. Anyi ga edebe akwukwo ohuru gi n’obi!
Jul 8, 2010 na 3:29 PM
Daalụ maka isi na-ekwe omume! Ọ dị mma ịmata ụzọ abụọ akwa sọftụwia mepụtara n’ebe a na Indiana!
Jul 8, 2010 na 3:32 PM
Hụrụ ya n'anya, Doug! Ihe niile KA + A na-eme bụ ọmarịcha, mana m hụrụ ike nke ike ịkọwapụta ngwa ahịa na ngwa nyocha. Nnukwu ederede. Daalụ!
Jul 8, 2010 na 3:57 PM
Brad, anyị nwere ihu ọma inwe ụdị nnukwu ndị ọchụnta ego na steeti. Enwere m mmasị na ngwaahịa ọ bụla na-apụta site na Sproutbox na ụlọ ọrụ ahụ dị ịtụnanya. Ị mere nke ọma!
Jul 9, 2010 na 8: 28 AM
Doug: Daalụ maka ide nnukwu post nke gosipụtara TinderBox. Ọ pụtara na ị were oge iji nyochaa ihe anyị jikọtara ọnụ. Anyị nwere obi ụtọ n'ezie banyere ohere na ogo nke nkwado obodo.
Dika nkowa - KA + Onye soro na ndi ulo anyi TinderBox ya na ndi anyi na Gravity Labs, Dustin Sapp na Mike Fitzgerald.